အမျိုးသမီး Archives - Page6of 217 - Focus Myanmar
ဇနီး မယား ကို တန်ဖိုးထာကြပါ
ဒီနေ့တော့ ဝယ်စရာဘာမှမရှိလောက်ပါဘူးဆိုပြီး ပိုက်ဆံအိပ်ထဲကငွေကို စစ်မကြည့်ခဲ့ဘူး
တစ်နေ့လုံး သာမာန်အသေးအဖွဲလောက်သာသုံးရင်း တကယ်လဲကြီးကြီးမားမားမရှိခဲ့ပါဘူး
ညနေအိမ်ပြန်ခါနီးတော့ ကျွန်တော့အလုပ်ထဲကို မထင်မှတ်ဘဲ ကျွန်တော့မိတ်ဆွေတွေရောက်လာတယ်ဗျာ
အကူအညီငံ့လင့်နေသော ကမ္ဘာမြေရဲ့ လူတိုင်းစွံ့အ သွားစေသော အထိရှဆုံး ပုံရိပ်များနဲ့ နောက်ကွယ်ကအကြောင်းအရာများ
၃- အမိူက်တစ်ပြုံတစ်မကြီးကိုဖြစ်ပေါ်စေသော အံ့မခန်း လှပတဲ့ပွဲတော်များ
၁၉၈၆ ခုနှစ် ခလိလန်းက ဘောလုံးပွဲတော်ဟာ သူ့ရဲ့လှပမူနဲ့ ကြီးကျယ်ခန်းနားမူအတွက် လူတိုင်းကို အထင်ကြီးစေခဲ့ပါတယ်။ ဒီပွဲတော်မှာ ၁.၄ မီလီယံရှိတဲ့ဘောလုံးတွေကို လွတ်တင်ခဲ့တာပါ။ ဘောလုံးပွဲတော်ကို ဂရင်းနစ်စံချိန်ဝင်အောင်ကြိုးစားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဝမ်းနည်းစွာပဲအလုပ်မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ ဒီပွဲတေ်ာပြီးသွားပေမယ့် မပြီးဆုံးတာကတော့ ပတ်ဝန်းကျင်တွေ ဘောလုံးအမိူက်သရိုက်တွေကျန်ရှိနေခဲ့တာပါ။ လေဆိပ်တွေ ရပ်နားထားရခြင်းနဲ့ များစွာသော ကားအက်စီးဒန့်တွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာနောက်ထပ် ဒီလိုချဲ့ကားလုပ်တဲ့ ပွဲတော်မျိုး မလုပ်မိအောင် ဒီပွဲတော်က သတိပေးလိုက်သလိုပါပဲ။
အရက်ကို ရေအမှတ်ဖြင့်သောက်ရင် အပြစ်ရှိပါသလား
“အရက်သေစာကို ရေအဖြစ်နဲ့ စိတ်က ပြဌာန်းသောက်ရင် အပြစ်ရှိမရှိဘူးဆိုပြီး အငြင်းအခုံဖြစ်တာပါ ဘုရား ဆရာတော်ကပဲ ဆုံးဖြတ်ပေးတော်မူပါဘုရား . . ” ဟု ဒကာ ဖြစ်သူ က လျှောက်ထားပန်ကြားအပ်ပါသည်. . .
ဆရာတော် က. . . . “ဒကာ က ဘယ်ဘက်ကလဲ. . အပြစ်ရှိတဲ့ ဘက်ကလား ၊ အပြစ်မရှိတဲ့ဘက်ကလား . . ”
” အရက်ကို ရေ အဖြစ်နဲ့ စိတ်က ပြဌာန်းပြီး သောက်ရင် အပြစ်မရှိဘူးလို့ “တပည့်တော် ကထင်ကြောင်းပါဘုရား . . ဟုလျှောက်ထားလေသည်. . .
ရဟန်း သံဃာတော် အရှင်မြတ် များသည် ဘယ်ဘက် ပုခုံး မှာ သင်္ကန်းတော် ကို ဖုံးလွှမ်းရတဲ့ အကြောင်းအရင်း
တန်ခိုးက လက်ဝဲ၊ ပညာက လက်ယာ။တန်ခိုးဆိုတာ အာသဝေါ တရားတို့ ရဲ့ကုန်ရာခန်းရာ အရဟတ္တဓဇ၊အရဟတ္တရဲ့ အလံတံခွန်သာဖြစ်တယ်။ပညာဆိုတာကတော့ ၀ိပဿနာ ပညာ၊မဂ်ပညာ၊ ဖိုလ်ပညာကနေ နိဗ္ဗာန်ကို ရဖို့ ရောက်ဖို့ ပါ။
ပုထုဇဉ်တို့ ရဲ့ စိတ်သဘာဝဆိုတာ အဆန်းကြိုက်၊ တစ်ခုရိုး တစ်မျိုးပြောင်းပြီး တစ်သံသရာလုံး ဆန်းတယ်ထင်တာတွေနောက်လိုက်ခဲ့ကြတယ်။ရိုင်းရိုင်းပြောရရင် လမ်းဘေး က မျောက်ပွဲ၊ မျက်လှည့်ပွဲကအစ ဆန်းတယ်ထင်တာ မှန်သမျှမှာ လူတွေမေ့မျော သာယာနေတတ်ကြတယ်။
သင့်ရဲ့ လက်ဖဝါးမှာ ” X ” လက္ခဏာလေး ၏ ကောင်းကျိုး များ…
လက်ဖဝါးပြင် နှစ်ခု စလုံးမှာ “X” လက္ခဏာလေး ပါရှိပါက ခေါင်းဆောင်ကောင်းများ ဖြစ်တက်
ဒီလို လက္ခဏာ ပါဝင်တဲ့ သူတော်တော်များများက အောင်မြင်တဲ့ လူကြီး လူကောင်းတွေ
လူသားအားလုံးနဲ့ ဆက်ဆံရေးမှာ ကောင်းမွန်တယ်။ ဘဝမှာ အောင်မြင်ကျော်ကြားမှု့တွေနဲ့
ကိုယ်ဝန် ဆောင်တွေ သိထားသင့်တဲ့ ရေထဲမှာ ကလေးမွေးခြင်း
ရေထဲမှာ ကလေးမွေးခြင်းဆိုတာ ဘာလဲ
ရေထဲမှာ ကလေးမွေးခြင်းဆိုတာကတော့ ရေနွေးထည့်ထားတဲ့ ရေနွေးကန်ထဲမှာ ကလေးမွေးတာပါ။ မေမေ့ကလေးလေးက ဗိုက်ထဲမှာ နေကတည်းက ရေမြွှာတွေနဲ့ ဝန်းရံထားပြီးသားဆိုတော့ မွေးလာတဲ့အခါမှာလည်း ပတ်ဝန်းကျင် ဗိုက်ထဲကလိုမျိုး ဆင်တူနည်းပါးလေးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် ကလေးရော မေမေ့အတွက်ပါ အဆင်ပြေစေနိုင်ပါတယ်။
အမျိုးသားတွေ ဆက်စီ ကျတယ်လို့ ထင်ကြတဲ့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ဆံပင်ပုံစံနဲ့ မျက်လုံးအရောင်
ပေါင် 180 မှ ပေါင် 120 ထိ ဝိတ်ချနိုင်ခဲ့သူပြောပြတဲ့ ဝိတ်ကျ နည်းလမ်းကောင်းများ
ပိန်သွားတဲ့အကြောင်းလေး ပြောပြပါမယ်စာသိပ်မရေးတတ်လို့ အမှားပါသွားရင် ခွင့်လွှတ်ပါပထမဆုံးကိုယ်ဝိတ်တက်လာတယ်ပေါ့နော်အရင်ကလည်း မပိန်ခဲ့ပါဘူးလက်မှတ်ထိုးခဲ့တုန်းက ပုံလေးလည်း ထည့်ပေးထားပါတယ်တချို့က ကလေးမွေးလို့ အရင်ပိန်ရာက ဝ လာတယ် ထင်ကြလို့ပါနဂို လုံးတုတ်ကနေ ကလေးရှိပြီး ပိုပိူဝလာခဲ့တာပါ
ပထမဆုံး ဒိတ်မှာတင် အလိမ်ခံရသူ အမျိုးသမီးအား ဆိုင်ဝန်ထမ်းများက ကယ်တင်
ပထမဆုံး ဒိတ်အနေနဲ့ တွေ့ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး ထိုအမျိုးသားက ထွက်သွားပြီး အမျိုးသမီးငယ်ရဲ့ ဖုန်းကိုတော့ ဘလော့ခဲ့ကာ သူမအား ကုန်ကျခံစေခဲ့ပါတယ်။
ဆိုင်ပိုင်ရှင် Christian Avant ကတော့ ဒီလို မမျှော်လင့်ထားတဲ့ အခြေအနေတစ်ခုကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဆိုင်ပိုင်ရှင် Christian Avant ရဲ့ ပုံပါ
“ပိုက်ဆံသွားထုတ်မယ်လို့ အကြောင်းပြပြီးထွက်သွားတာ လုံးဝပြန်မလာတော့တဲ့အပြင် ဖုန်းနံပါတ်ကိုတောင် ဘလော့သွားတယ်၊ တော်တော် အဆင့်မရှိတဲ့လူ” လို့ Christian Avant က ရေးပြီး Facebook ပေါ်တင်ခဲ့ပါတယ်။